Arts & Humanities » ကျွန်တော် မချစ်သော ကြယ်မည်းမည်းကြီးများကို ဝေဖန်ခြင်း	34
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 31, 2014 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary | 34 comments
ကျွန်တော်တို့လို ပရိသတ်တွေဆိုတာ ချစ်သော ကြယ်ပွင့်များဆီက အလင်းရောင်ကိုသာ မျှော်လင့်ပါသည်။
ပုပ်နံ့ထွက်နေသော အနက်ရောင်ကြယ်များကို အနုပညာဆိုသော အရာနဲ့တော့ မလွှမ်းခြုံသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ယူဆသည်။
အနုပညာသည် သီးခြားစွာသော ဂုဏ်သတ္တိ်များဖြင့် သီးခြားစွာ ရပ်တည်နေသော အရာဖြစ်သည်။
Kaung Kin Pyar says: ရှိတော့ရှိတယ်…ရှားတယ်…(ခုခေတ်မှာ…)…။
Maung Thura says: ဆင်ဆာသာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့လားးးးးး တချို့က….
လွတ်လပ်မှုနဲ့လည်းမတန်သေးဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: သူလဲလေ ပုထုဇဉ်ပေမို့…
တစ်ခုရှိတာက သာမန်လူတွေလဲ ကောင်းသူ ဆိုးသူရှိပါတယ်.. သွားဝေဖန်ကျိ.. ပါးကွဲသွားမာပေါ့ သူတို့ကျတော့ ကြိုက်သလို ကလော်တုတ် သီးခံရတယ်လေ သူတို့ Professional အရ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: ပုထုဇဉ်ဆိုပေမယ့်.. သူတို့က… သာမန်မဟုတ်ဘူးလေ…
မတော်တရော် လုပ်မပြသင့်တဲ့ အနေထားနဲ့ ရပ်တည်နေရတဲ့ ပုထုဇဉ်တွေ… သာမန်လူတွေက မတော်တရော် ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်…
ခင်ဇော် says: ပြောရမယ်ဆိုရင် အနုပညာကိုချစ်လို့ ဘာလို့ နဲ့ပြောနေတာကို
ပြီးမှ တောက်တလွဲတွေ လုပ်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: အဲ့ဒါ… အဲ့ဒါ… အနုပညာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့.. သူတို့ကို..မအပ်မစပ်လို့ပဲ..မြင်တယ်..
Iris says: Wow.. ​ပြောသလိုပဲ..ပ​ရောဖက်​ရှင်​နယ်​နဲ့ပါစင်​နယ်​ကိုမ​ရောသင့်​ဘူး။ ငြင်​ခုန်​ခြင်းအနုပညာပြီး​တော့ ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာ​ပေါ့။ အမှတ်​တမဲ့ထွက်​သွားတဲ့ပုံ​ပေါက်​ပါတယ်​။
Maung Thura says: ကျနော် မောင်သူရကတော့.. .ဆဲဆိုခြင်းနဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းကို အနုပညာစာရင်း မသွင်းရေးချ မသွင်းးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အနုပညာမှာကိုထဲက “၀ီဘစ်ဆ” ရသ (ဦးဇင်းဝီနှင့် အဆိုတော် ရသ မဟုတ်) ဆိုတာရှိတယ် ၀က်ရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အနုပညာ ​မြောက်​​အောင်​ ငြင်းခုံဆဲဆိုတာမ​တွေ့ကြုံဖူး​သေးလို့ပါ ။
Maung Thura says: ဆဲဆိုခြင်းဟာ အနုပညာမြောက်ကြေးဆိုရင် ဦးကြောင်တို့ ဦးဂျော်နီပုတို့က အနုပညာရှင်တွေပဲ
Wow says: Art
အနုပညာရှင် creater တွေရှိရမဲ့ အရည်အချင်းတွေ definition ထဲမှာ မပါဝူးဟ.. ဒါပေမဲ့ the criticism of art ဆိုဒါလဲပါတော့.. ကိုယ်လိုရာဆွဲ ဝေဖန်ဂျဒါပေါ့… ဒါလဲ အနုပညာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့..အနုပညာရှင်ပါလို့..ပြောပြောနေတဲ့
ကျနော်က..အနုပညာရှင် စာရင်း မသွင်းရေးချ မသွင်းးးး ဆိုတော့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဒီလိုရှိဒယ် ၀က် ရဲ့.. အဲလေ ဆက်ဆက်ရဲ့..
နှစ်သစ်မာ နင်နဲ့စ ငြင်းနေရတာသိပ်တော့မကောင်းဝူး.. လူဆိုတာက ဘုရားရဟန္နာမှသာ အပြစ်ကင်းဂျဒါမလား… ဒါက ဗုဒ္ဒဘာသာ
လာမယ် ခရစ်ယမ် ရွာထဲက ပြည့်တန်ဆာမအိမ်ကို ခဲနဲ့ဝိုင်းပစ်မယ့် ရွာသားတွေကို ယေရှုက မပြစ်နဲ့လို့မတားပါ… ဒါပေမဲ့ သင်တို့ထဲက အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေသာ ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူမှ ခဲနဲ့မပြစ်နိုင်သလိုပေါ့…
မွတ်စ်ကတော့ ကကြောင်ပြောဒါ ဒဂျီးမာမွတ်ခိုင်မေးကျိဒဲ့.. ဆိုတော့ နိသတ်မှတ်တာ မသတ်မှတ်တာ နိအပိုင်း၊ နိကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်…
Maung Thura says: ဖြည့် ကြည့်ပေးလို့ မြဦး… အဲလေ..မရဘူး Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ကျုပ်ကလည်း Professional နဲ့ Personal ခွဲမြင်မိတယ်…သူလည်းလေပုထုဇင်ပေပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: သူတို့ရဲ့ Personal က တိုင်းသိပြည်သိ ဖြစ်နေတဲ့အခါ…
အဲဒီ တိုင်းသိပြည်သိ Personal ကလည်း…စိတ်ပျက်စရာ သတင်းဆိုးတွေ ဖြစ်နေတဲ့အခါ…. ကျနော်က… အနုပညာသမားတစ်ယောက်ဟာ…ပြောသလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်မခံပါဘူး ။
ထိန်းထိန်းသိန်းသိန်း နေသင့်တယ်ထင်တာပဲ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: သဘောတူပါ၏။
Maung Thura says: ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ရလဒ်ကို ဦးစားပေး ကြည့်ပါတယ်။
အတုယူအားကျရလောက်အောင် နေပြသင့်တယ်လို့ထင်. . Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျန်တာ မသိ။
Maung Thura says: အဲ့အန်ကယ်ကြီး အဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာ အဲ့လိုတွေ ပြောသွားလို့တော့ဖြင့် အကယ်ဒမီ ထပ်မပေးချင်
အောင် မိုးသူ says: လူမင်းက မိုက်က သူနဲ့နီးနေမှန်းမသိလိုက်တာဖြစ်မှာပါ။ သူပြောပုံကလည်း အချင်းချင်းစနောက်ပုံပြောလိုက်တာ မိုက်ကရိုဖုန်းကြောင့် အကျယ်ကြီးထွက်သွားခဲ့တာ။ မင်းအုပ်စိုးလုပ်ရပ်ကတော့ အစကတည်းက မကြိုက်ခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ တစ်ခါတစ်လေကျရင် လူတစ်ယောက်အနုပညာနဲ့ သူရဲ့ ပါစင်နယ်ကို ခွဲခြားကြည်သင့်ရင် ကြည့်ရမယ် အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။
Maung Thura says: အဲ့ဒီ လူဟာ… တိုင်းပြည်ရဲ့ မီဒီယာတွေပေါ်က..ကိုယ်ဟန်ပြသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်တော့…
သူပြတဲ့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာ.. ညံ့ဖျင်းနေဖို့မသင့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: သူရဲ့ သတင်းကအစကတည်းမကောင်းတာပါ။ ဒါမယ့် အဲသည်ကိစ္စမှာတော့ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အချို့ ကိစ္စတွေမှာ လူတစ်ချို့ဟာ Artist နဲ့ Art ကို ခွဲခြားမမြင်တတ်ကြဘူး။
မောင်ဘလိူင် says: Artiste က သဘင် အနုသုခုမ ပညာသည်ပေါ့..။ Artist ကျတော့ စာပေ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု ပညာသည်ပေါ့။
CharTooLan says: ဒီအောင်သျဲလင်းကတော့ ငွေကြယ်ပွင့် လက်တာတောင်သူ့ဟာသူမလက်ရဝူး
ဖွေးဖွေးပါထဲ့ လက်ခိုင်းနေသေး ဒဂယ်မလွယ် :P
Ma Ma says: လူကြီးအတွေးနဲ့ ပြောရရင်…
pooch says: ပါစင်​နယ်​ ပရို အတတ်​နိုင်​ဆုံး ခွဲမြင်​ဖို့ ကြိုးစား​လေ့ရှိပါတယ်​
အ​ရေထူ​အောင်​ ကျင့်​မလို့ ဟီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: အုပ်​ကထကို ပဲမြစ်​နဲ့နှိုင်းပါနဲ့​အေ
Shwe Ei says: -FM ကလွှင့်တဲ့ ချမ်းချမ်း အင်တာဗျူးလေးပြောပြမယ်…
…..အိုက်ဒါလေ..အားပေးကျပါအုံးလို့…အရမ်းလဲ ကြိုးစားထားပါတယ်လို့…ညင်းးးညင်းးး -သများတော့ သူ့အသံကြားတိုင်း စိတ်နာနေရော :P
Yae Myae Tha Ninn says: အသားအရောင် ခွဲခြားခြင်းတွေ ရပ်ပါ.. ဆက်ဆက်… လူမင်း မည်းတာ… မင်းအုပ်စိုး မည်းတာ… ဘာဖြစ်လဲ လိုက်တင်ပေးလိုက်ရင် အဲဒါ ရုပ်ပိုထွက်တယ် ဟ… :P
Maung Thura says: ဖြူချင်ဖြူပေါ့…မည်းချင်မည်းလည်း…လူသားရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ..လေ..
လုံမလေးမွန်မွန် says: မင်းအုပ်စိုးရဲ့ သရပါစာစောင်ကို အများကြီးဖတ်ဖူးတယ်.. ရသစာကို အရမ်းအလေးပေးထားတယ်.. သူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ကြိုက်မယ်တယ်… ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ ထပ်တူညီရမယ် ထင်တာပဲ.. ကြားဖူးတယ်.. ကြယ်ပွင့်တော့ မဟုတ်ဘူး.. ဒါပေမယ့် သူက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူမှုရေးအရမ်းလုပ်တဲ့သူပေါ့… အဓိကက အမှိုက်ကောက်တာ… သူ့ရဲ့ ဖဘ မှာဆိုလည်း အမှိုက်ကောက်ဖို့ နှိုးဆော်ထားတာတွေ အများကြီး.. အမှိုက်ကောက်ဖို့ ကိစ္စတွေမှာလည်း သူက ရှေ့ဆုံးက တက်ကြွတယ်…
ko six says: ၀တ္ထုဆုမ​ပေး​သေးတာနဲ့ပဲ